Puntland oo War Ka Soo Saartay Shaqada Dekeda Bosaso kadib Dilkii Paol Farmosa (DAAWO) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Puntland oo War Ka Soo Saartay Shaqada Dekeda Bosaso kadib Dilkii Paol Farmosa (DAAWO)
Puntland oo War Ka Soo Saartay Shaqada Dekeda Bosaso kadib Dilkii Paol Farmosa (DAAWO)
February 5, 2019 - By: HORSEED STAFF
Wasiirka Dekedaha Puntland Siciid Maxamed Raage
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Siciid Maxamed Raage ayaa sheegay in shaqadii dekeda Bosaso dib loo bilaabay, ka dib markii shalay magaalada Bosaso lagu dilay maamulihii Dekeda Paol Farmosa.
Wasiirka dekedaha oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta wasaarada dekedaha ee Bosaso waxa uu ka hadlay dilkii magaalada Bosaso loogu gaystay maamulihii Dekeda ee shirkadda Paol Farmosa iyo sida ay u socoto shaqada Dekeda Magaaladda Bosaso.
Wuxuu sheegay in dilka maareeyaha uu saamayn ku yeeshay shaqaalihii Ajnebiga ee ka shaqaynayay Dekeda iyo guud ahaan shaqadii Dekeda. Hase yeeshee wuxuu tilmaamay in shaqaalihii ay tababareen ay sii wadaan shaqadii Dekeda oo socota.
” dad ajaaniib ah ayay ahaayeen oo waa saamaynaysaa wixii dhacay, laakiin qof ajnebi ah ma dhoofin. shaqaale ayay tababareen oo shaqadii sii wado” ayuu yiri wasiirka Dekedaha Puntland Siciid Maxamed Raage
Dhinaca kale, Wasiirku wuxuu sheegay in dilkii maamulihii Dekeda Bosaso uusan wax isbedel ku keeni doonin heshiiskii lala galay shirkadda P%O port ee balaarinta Dekeda Bosaso.
Howlihii shaqo ee Dekeda Bosaso ayaa muddo kooban hakad galay ka dib markiii Shalay subax la dilay Maamulihii Dekeda ee shirkada P&O port ee dalkaasi Imaraadka carabta. Dilka ayaa waxaa sheegtay ururka Alshabaab.
Shaqadii Dekeda oo maanta dib loo bilaabay waxaa shaqaynayay shaqaaalihii Soomaalida oo kaliya, waxaana shaqadii si kumeel gaar ah ula wareegay Wasiirka Dekedaha Puntland Siciid Maxamed Raago iyo Agaasimihii Dekeda C/majiid Samatar Jaafaan.
Wasiirka Dekedaha Puntland Siciid Maxamed Raago